Madaxweynaha Puntland oo maanta dib ugu laabanaya Garoowe, safar maalmo qaatay ka dib.
September 11, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulalahi Deni ayaa lafilayaa in uu maanta dib ugu laabto caasumada Puntland ee Garoowe, isagoo maalmihii u dambeeyey safaro ku tagay dalalka Itoobiya iyo Imaraatka Carabta, wuxuuna goobahaas kula kulmay qaar kamid ah dhinacyada ay wada hadlayeen.
Madaxweynaha Puntland ayaa Itoobiya kulamo kala gedisan kula yeeshay masuuliyiin katirsan Xukuumadda Addis Ababa oo ay ka wada hadleen arrimaha iskaashiga dhinacyada oo ay ku jiraan qorshaha xagga ammaanka ah.
Sidaas oo kale Madaxweynaha Puntland ayaa dalka Imaaraatka Carabta oo uu kusugnaa maalmo badan kula kulmay qaar kamid ah madaxda Ganacsatada ee kasoo jeeda Puntland iyo kuwa dalka Imaaraatka oo ay ka wada hadleen ka qeybgalka kulanka maalgashiga.
Madaxweynaha Puntland ayaa lafilayaa in uu faahfaahin ka bixiyo socdaalkisiii uu ku tagay dalalkaas, xili ay soo baxayaan warar sheegaya in dhismaha dekeda Boosaaso ay qeyb ka ahayd arrimaha ugu socdaalay Imaaraatka Carabta, waxaana indhaha lagu hayaa hanaanka shaqo ee dekeda.
Siciid Deni ayaa daahfuri doona 15-ka bishan shirka maalgashiga Puntland oo ay ka qeybgalayaan dhinacyo kala duwan, waxaana indhaha lagu hayaa hanaanka qabsoomida shirkaas, iyadoo ay dad badan oo kasoo jeeda caalamka, gaar ahaana daneeyaasha Soomaaliya ay ka qeybgali doonaan.
Safaro an miro dhalin oo loogu tamashle tago Itoobiya iyo Dubay waa kuwaan ku nacay GAAS.Gaas baa dalxiis u aadi jirey labadaas wadan.Dalxiiskaas oo lagu magacaabi jirey safar shaqo qaran.Ugu dambayn yaa Dani u sheega haddii uusan wax dibadaha ka soo kordhinayn in uusan meelna wadanka ha uga bixin ee ka shaqeeyo gudaha oo naga celiyo cadawka xamar ka soo miciyo lisanaya.Waa tan oo uu Ina khayre uruursanayo ciidamo aad u badan oo ka kooban beelaha USC kaliya.Ina Khayrena cadawgiisu waa reer puntlaan.Isaga iyo beshiisuba waxay ku taahaan see loo bur-buriyaa magaca puntlaan.Ina Khayre waxuu ku mashquulsan yahay abaabulka beelaha USC oo uu rabaa in uu isku dube rito Maleeshiyaad badan oo uu ugu duulo hadba meeshuu rabo in uu wax u dhimo.